Guddoomiyaha Aqalka sare oo dhallinyarada ugu baaqay Nabadeynta dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Aqalka sare oo dhallinyarada ugu baaqay Nabadeynta dalka
Guddoomiyaha Aqalka sare oo dhallinyarada ugu baaqay Nabadeynta dalka
Guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay nabadda ka qeyb qaataan, maadaama ay maanta ku asteysantahay maalinta caalamiga ah ee Nabadda adduunka 21-ka september.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee dalka ayaa ugu baaqay dhallinyarada inay gacan weyn ka geystaan Nabadeynta dalka, waxaana uu xusay in baaqa Nabadda ay qaataan maadaama maanta ay ku asteysantahay maalinta Nabadda Adduunka.
“Dhallinyarooy gacmaha isqabsada oo kuligiin is wargeliya, isa soo taago, tusa awooddiina inaad Nabad u taagantihiin oo aad soo dhaweyneysaan Nabadda Adduunka, oo aad diidantihiin colaad, ismuquunin iyo dilka” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare oo hadalkiisa ku daray “Barbaareey Barbaar caafimaadeey, baaqa nabadda soo raac, haddii aan bir jeex iyo geesiyaal ku soo bixin qabyo kama baxeysaan”.
Maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee Nabadda Aduunka.
Next articleGuddoomiyaha Gobolka oo dhallinyarada ku booriyay xoojinta Nabadda